पत्रपत्रिकामा आज: के के छन् मुख्य खबर ?
आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले फरक फरक विषयलाई प्राथकितामा राखेर खबर छापेका छन् । आजको कान्तिपुरले हिचकिचाए रोजगारदाता शिर्षकमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगार हिचकिचाएको खबर छापेको छ ।
त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मलाई मार्ने सूचना आयोः दाहाल शिर्षकमा नेकपा अध्यक्ष दाहालल नेत्र विक्रम चन्दको समुहबाट आफूलाई मार्ने सूचना आएको बताएका छन् ।
त्यस्ते अन्नपूर्णले नै बोइङ कम्पनीको ७३७ म्याक्सका ३७१ विमान ग्राउन्डेड शिर्षकमा अमेरिकी निर्माता कम्पनीले आफ्ना सबै ७३७ म्याक्स मोडलको विमानमा रोक लगाएको खबर छापेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा अवैध शुल्कको विरोध गर्ने किस्ट मेडिकल कलेजमा ५० विद्यार्थी फेल शिर्षकमा समाचार छापेको छ ।
समाचार अनुसार, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्न नमान्ने करिब ५० विद्यार्थीलाई ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको छ । आन्तरिक परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थी बोर्डको परीक्षाबाट बञ्चित हुन्छन् । यसबारे उजुरी परेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नागरिक दैनिकमा राष्ट्रिय सभामा दुइ करोडको खरिद महासचिवको सहमति बिना भुक्तानी शिर्षकमा समाचार छापेको समाचार अनुसार, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाको दबाबमा महासचिव मानोहरप्रसाद भट्टराईको सहमति विना उनको ठाउँमा सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट १ करोड १९ लाख रुपैया भुक्तानी गरेको खुलेको छ ।
हेर्नुस् आजको पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा कुन समाचारले ठाउँ पाएका छन् ?
बाहिर हुदाँ ‘राज्य’ दिन्छु भन्ने, सत्तामा हुदाँ गुठी पनि खोसिदिने ?: राजेन्द्र लिङदेन